ရော်နယ်ဒိုကသာ ဘလွန်းဒီအော်ဆုကို ရသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၃) ခု ထွက်ပေါ်လာ - MySport Myanmar
ရော်နယ်ဒိုကသာ ဘလွန်းဒီအော်ဆုကို ရသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၃) ခု ထွက်ပေါ်လာ
ရော်နယ်ဒိုဟာ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ဘလွန်းဒီအော်ဆုကို ရရှိဖို့ ရေပန်းစားတဲ့ ကစားသမား (၃) ဦးထဲက တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ဘာလို့ ဘလွန်းဒီအော်ဆု ရရှိနိုင်တာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း ထွက်လာပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ မက်ဆီ၊ ဗန်ဒိုက်တို့ကို ကျော်ပြီး (၂၀၁၉) ခုနှစ် ဘလွန်းဒီအော်ဆုကို မရနိုင်ဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အခု သူ ရနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၃) ခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
၁. ဂျုဗင်တပ်အသင်းမှာ ဆုဖလား ရရှိခြင်း
ရော်နယ်ဒိုဟာ ရီးရဲလ်အသင်းမှာ (၉) နှစ်ကြာ ကစားခဲ့ပြီးနောက် အီတလီ စီးရီးအေ ဂျုဗင်တပ်ကို အပြီးသတ် ပြောင်းလာခဲ့ပြီး၊ စရောက်ရောက်ချင်းမှာတော့ အတော်လေး ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ မနှစ်က ဂျုဗင်တပ်အသင်းနဲ့ စီးရီးအေ ဆုဖလားကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ (၃၁) ပွဲ ကစားခဲ့ရာမှာ သွင်းဂိုး (၂၁) ဂိုး နဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု (၈) ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့လို့ စီးရီးအေ အကောင်းဆုံးဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂. ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိခြင်း
ရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ပြိုင်ပွဲစုံ (၄၃) ပွဲ ကစားခဲ့ရာမှာ၊ သွင်းဂိုး (၂၈) ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးဖန်တီးမှု (၁၀) ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ပြည်တွင်းဖလား (၂) ခုကို ထိုက်တန်စွာနဲ့ ရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ဂျုဗင်တပ်အသင်းကို စီးရီးအေ ဆုဖလား (၈) ကြိမ်ဆက် ရရှိအောင် ကူညီနိုင်ခဲ့ပြီး၊ အီတလီ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုး (၁) ဂိုးတည်းနဲ့ အေစီမီလန်ကို အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့ပါတယ်။
၃. UEFA Nations League ကို ရရှိခြင်း
ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုဟာ ဂျုဗင်တပ်အသင်းနဲ့သာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ၊ သူ့ရဲ့ လက်ရွေးစင် ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့လည်း ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူက ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ အတူ UEFA Nations League ဖလားကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဆီးမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့စဉ်က ဟယ်ထရစ် (၃) ဂိုးအထိတောင် သွင်းနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရျောနယျဒိုဟာ (၂၀၁၉) ခုနှဈ ဘလှနျးဒီအျောဆုကို ရရှိဖို့ ရပေနျးစားတဲ့ ကစားသမား (၃) ဦးထဲက တဈဦး ဖွဈပွီး၊ ဘာလို့ ဘလှနျးဒီအျောဆု ရရှိနိုငျတာလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျး ထှကျလာပါတယျ။ ရျောနယျဒိုဟာ မကျဆီ၊ ဗနျဒိုကျတို့ကို ကြျောပွီး (၂၀၁၉) ခုနှဈ ဘလှနျးဒီအျောဆုကို မရနိုငျဘူးလို့ ထငျမွငျယူဆခကျြတှေ ရှိခဲ့ပမေဲ့ အခု သူ ရနိုငျတဲ့ အကွောငျးအရငျး (၃) ခု ထှကျပျေါလာပါတယျ။
၁. ဂြုဗငျတပျအသငျးမှာ ဆုဖလား ရရှိခွငျး
ရျောနယျဒိုဟာ ရီးရဲလျအသငျးမှာ (၉) နှဈကွာ ကစားခဲ့ပွီးနောကျ အီတလီ စီးရီးအေ ဂြုဗငျတပျကို အပွီးသတျ ပွောငျးလာခဲ့ပွီး၊ စရောကျရောကျခငျြးမှာတော့ အတျောလေး ရုနျးကနျနခေဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူဟာ မနှဈက ဂြုဗငျတပျအသငျးနဲ့ စီးရီးအေ ဆုဖလားကို ရရှိခဲ့ပွီး၊ (၃၁) ပှဲ ကစားခဲ့ရာမှာ သှငျးဂိုး (၂၁) ဂိုး နဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှု (၈) ကွိမျ ပွုလုပျခဲ့လို့ စီးရီးအေ အကောငျးဆုံးဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
၂. ပွညျတှငျးပွိုငျပှဲမှာ အောငျမွငျမှု ရရှိခွငျး
ရျောနယျဒိုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ပွိုငျပှဲစုံ (၄၃) ပှဲ ကစားခဲ့ရာမှာ၊ သှငျးဂိုး (၂၈) ဂိုး သှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး ဂိုးဖနျတီးမှု (၁၀) ကွိမျ ပွုလုပျနိုငျခဲ့လို့ ပွညျတှငျးဖလား (၂) ခုကို ထိုကျတနျစှာနဲ့ ရရှိနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူက ဂြုဗငျတပျအသငျးကို စီးရီးအေ ဆုဖလား (၈) ကွိမျဆကျ ရရှိအောငျ ကူညီနိုငျခဲ့ပွီး၊ အီတလီ စူပါဖလား ဗိုလျလုပှဲမှာ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုး (၁) ဂိုးတညျးနဲ့ အစေီမီလနျကို အနိုငျရ ဗိုလျစှဲသှားခဲ့ပါတယျ။
၃. UEFA Nations League ကို ရရှိခွငျး
ပျေါတူဂီ လကျရှေးစငျ တိုကျစဈမှူး ရျောနယျဒိုဟာ ဂြုဗငျတပျအသငျးနဲ့သာ အောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့တာ မဟုတျဘဲ၊ သူ့ရဲ့ လကျရှေးစငျ ပျေါတူဂီအသငျးနဲ့လညျး ကွီးမားတဲ့ အောငျမွငျမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ သူက ပျေါတူဂီအသငျးနဲ့ အတူ UEFA Nations League ဖလားကို ရရှိခဲ့ပွီး၊ ဆီးမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျမှာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့စဉျက ဟယျထရဈ (၃) ဂိုးအထိတောငျ သှငျးနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
MySport Myanmar2019-12-02T21:14:14+06:30December 2nd, 2019|Football, News, Premier League|